Caro ka dhalatay tijaabada nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi – The Voice of Northeastern Kenya
Kuuriyada Koonfureed ayaa taxadar xumo halis badan ku tilmaantay tijaabadii nukliyeerka ee ay shalay samaysay Kuuriyada Waqooyi.
Madaxwaynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye, ayaa sheegtay in Pyongyang ay arrintan dhaxalsiin doonto cunaqabatayn iyo go’doomin hor leh halka dalka shiinaha oo ah dalka ugu wayn ee ay saaxiibaha yihiin Kuuriyada Waqooyi uu isna si aad ah u cambaareeyay talaabadaasi.
Maraykanka ayaa dhankiisa talaabadaasi ay qaadey Kuuriyada waqooyi ku tilmaamay tallaabo daandaansi ah oo liddi ku ah qaraar ka soo baxay Qaramada Midoobay.
Waa gantaalkii ugu awoodda badnaa ee Kuuriyada Waqooyi ay abid rido, waxana loo malaynayaa in qaraxa nukliyeerkaasi uu xitaa ka awood badan yahay midkii Hiroshima lagu dhuftay dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka.
Hore ayaa waxaa u jiray dhul gariirro baaxad leh kuwaas oo ka dhacay isla goobta tijaabada laga sameeyey laakinse wax xaqiijin ah lagama hayo Kuuriyada Waqooyi.
Hay’adda daraasaadka lakabyada dhulka ee Maraykanka ee la socota dhaqdhaqaaqyada dhulku ayaa waxay sheegaysaa in gariirka waqooyiga bari ee dalkaas laga dareemay uu qarax ka dhashay, laakiin ma aysan sheegin nooca qaraxa.
Ra’iisul wasaaraha Japan, Shinzo Abe, waxa uu shir jaraa’id ka sheegay in Japan ay cabasho u gudbisay Pyongyang waxa uuna wacad ku maray in aan loo dulqaadan Karin waxa ay sameyneeso kuuriyada waqooyi.
Kuuriyada waqooyi ayaa laga mamnuucay in ay samayso wax tijaabo ah oo ku saabsan nukliyeer ama tiknoloojiyada gantaallada laakin hadaladaasi waxa dhag jalaaq u siinin xukuumaada pyong pyang.
← Sedex katirsan Militariga Turkiga oo lagu dilay dalka Syria
Macalin loo xiray in uu ardayda ku booriyay in ay schoolkooda dab qabadsiiyaan →